Ihe omume Fathom '' Fest Fest ': izu 8 nke egwu & ọchị na nnukwu ihuenyo ọdịda a!
Mbido Ihe dị mma ịme Ihe omume Fathom '' Fest Fest ': izu 8 nke ụjọ & ọchị na nnukwu ihuenyo ọdịda a!
Ihe omume Fathom '' Fest Fest ': izu 8 nke ụjọ & ọchị na nnukwu ihuenyo ọdịda a!
by Waylon Jọdan September 14, 2021
by Waylon Jọdan September 14, 2021 364 echiche
Anyị hụrụ mmemme Halloween n'anya nke ọma ebe a na iHorror.com. Mgbe enyo ebe niile na -acha ọbara ọbara na nnukwu anụ na -ezo n'azụ akụkụ ọ bụla, anyị nọ na mmewere anyị. Ochie, ọhụrụ, anyị hụrụ ya niile n'anya, na Fathom Events anaghị eme ka anyị daa mgbe ha na -eme mmemme ụdịdị site na itinye ha na nnukwu ihuenyo ebe ha nọ.
N'afọ a, nke ahụ pụtara Egwu Fest: izu asatọ nke ịdị mma ụdịdị anaghị akwụsị akwụsị nke ahụ dị mma maka ezinụlọ niile malite na Septemba 26th! Site na ọgụ ochie ruo ihe nkiri Studio Ghibli, ha nwere ihe maka mmadụ niile!
Lelee ndepụta zuru ezu n'okpuru! Tiketi maka Egwu Fest nyocha nwere ike zụrụ site na Pịa ebe a!
Ihe omume Fathom Egwu Fest Kalenda!
Carrie Afọ 45: Sunday, Septemba 26 na Wenezdee, Septemba 29th
Dabere na ire kacha mma Stephen Stephen akụkọ, Carrie (Onyeka Onwenu) bụ onye nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na -enweghị ntụkwasị obi, enweghị ndị enyi… na enweghị echiche gbasara ike nzuzo telekinesis ya. Mana mgbe nne ya nwere nkụda mmụọ na ụmụ akwụkwọ ibe ya nwere nkụda mmụọ mechara rute oke, nwa na-emebu ihere na-aghọ ike a na-achịkwaghị achịkwa, na-achọ ịbọ ọbọ nke na-eme ka ọkụ ala mmụọ niile pụọ n'ọgba aghara nke ọbara, ọkụ, na sọlfọ! Piper Laurie, John Travolta, na Amy Irving dị egwu na egwu egwu a. Zụrụ TICKET ebe a.
Dracula, Frankenstein Njirimara ugboro abụọ: Satọde, Ọktoba 2
Ọ bụ afọ 90 kemgbe Universal Dracula na Frankenstein nke mbụ mara ihuenyo ahụ na ihe omume Fathom na -eweghachite nne nne nke ihe nkiri anụ mmiri niile na nnukwu ihuenyo na njiri mara pụrụ iche. Ndị na -akwado ga -aga njem ochie Universal Backlot dịka akụkụ nke nyocha. Bela Lugosi na Boris Karloff nwere obi ụtọ na izu ike dị ka ndị ọzọ na anyị nọ ebe a maka nkeji ọ bụla. Zụrụ TICKET ebe a.
Akwụkwọ Stuido Ghibli spirited n'Ebe Afọ 20: Sunday, October 3 (Dubbed), Mọnde, Ọktoba 4 (Subbed), na Wenezdee, Ọktoba 6 (Dubbed)
Ezinaụlọ Chihiro na -akwaga n'ụlọ ọhụrụ, mana mgbe ha kwụsịrị n'ụzọ iji chọpụta obodo a gbahapụrụ agbahapụ, nne na nna ya nwere mgbanwe dị omimi ma tinye Chihiro n'ime ụwa nke mmụọ dị egwu nke dibịa afa Yubaba na -achị. Tinye n'ọrụ n'ime ụlọ ịsa ahụ anwansi maka mmụọ na ndị mmụọ ọjọọ, Chihiro ga -eji amamihe ya niile wee lanarị ebe ọhụrụ a dị ịtụnanya, chọta ụzọ ịtọhapụ nne na nna ya wee laghachi n'ụwa nkịtị. N'ịbụ ndị jupụtara n'echiche na akụkọ na -atọ ụtọ, Spirited Away ghọrọ ihe mmerụ ahụ zuru ụwa ọnụ, ọ bụkwa otu n'ime ihe nkiri kacha asọpụrụ n'oge niile. Hayao Miyazaki meriri ihe nrite Academy maka ọmarịcha ihe nkiri a! Zụrụ TICKET ebe a.
Ndi Ajọ Ọnwụ Afọ 40 nke Mmeghe Pụrụ Iche nke Bruce Campbell: Tọzdee, Ọktoba 7
Ash (Bruce Campbell kwuru), enyi ya nwanyị Linda (Onyedikachi Betsy), nwanne ya nwanyị Cheryl (Ellen Sandweiss kwuru), na di na nwunye Scotty (Hal Delrich), na Shelly (Sarah York), kwọba n'ime ụlọ dịpụrụ adịpụ n'ime ọhịa maka ịpụ maka egwuregwu. Mgbe ha nọ ebe ahụ, ha na-ahụ Necronomicon Ex-Mortis (aka "Akwụkwọ nke Ndị Nwụrụ Anwụ"), Tome ochie nke ederede ya na-akpọte ndị nwụrụ anwụ mgbe a gụpụtara ya n'olu dara ụda. Mgbe ha hapụsịrị iju mmiri nke ihe ọjọọ n'amaghị ama, ndị enyi ise ahụ ga -alụ ọgụ maka ndụ ha ma ọ bụ bụrụ ndị nwere onwe ha. Zụrụ TICKET ebe a.
Na-eti mkpu Afọ 25: Sunday, October 10 na Mọnde, Ọktọba 11
Mgbe ọtụtụ ọnwụ dị omimi dakwasịrị obere obodo ha, otu ndị enyi na -adịghị mma nke Sidney Prescott na -edu (Neve ụlọikwuu) aghọọ onye egbugbere ọnụ kpuchiri ihu. Ka ọnụ ọgụgụ ahụ na-arị elu, Sidney na ndị enyi ya na-echigharịkwuru "iwu" nke ihe nkiri egwu iji nyere aka ịnyagharị egwu dị egwu ha bi n'ime ya. Courteney Cox, David Arquette kwuru, Uche Ulrich, Ọnye na -bụ Matthew Lillard?, Jamie Kennedy, Rose McGowan, na Drew Barrymore.
A ga-elekwa ndị na-eso ihe omume pụrụ iche anya n'azụ ihe nkiri na-egosi ajụjụ mkparịta ụka n'oge ochie. Wes Craven, Ọ bụ Kevin Williamson, Neve ụlọikwuu, Courteney Cox, Na ndị ọzọ. Zụrụ TICKET ebe a.
Ihe ngosi ochie ihuenyo TCM Akwụsị nke ụmụ ehi Afọ 30: Sunday, October 17 na Wednesday, October 20
Mgbe psychopath aha ya bụ Buffalo Bill na -egbu ụmụ nwanyị ma kwere na ọ ga -ewe mmadụ ịmara otu, ndị FBI na -eziga onye nnọchi anya Clarice Starling (Jodie Foster) iji gbaa onye mkpọrọ nwere nkụda mmụọ ajụjụ ọnụ: Dr. Hannibal Lecter (Anthony Onyekwere. Ka mmekọrịta ha na -etolite, a na -amanye Starling ihu ọ bụghị naanị ndị mmụọ ọjọọ ya, kamakwa ajọ ihe siri ike ọ nwere ike ọ gaghị enwe obi ike ịkwụsị! Zụrụ TICKET ebe a.
Studio Ghibli Ọrụ'slọ Na-agagharị Howl: Sọnde, Ọktọba 24th (akpọrọ ya), Mọnde, Ọktọba 25 (tinye akwụkwọ), na Tọzdee, Ọktọba 28th (akpọrọ)
Sophie, nwa agbọghọ dị jụụ na -arụ ọrụ n'ụlọ ahịa okpu, hụrụ na ndụ ya tụbara n'ọgba aghara mgbe ezigbo ọmarịcha ihe omimi aha ya bụ Howl kpopụrụ ya n'ụkwụ. Amoosu nzuzu efu na-abọ ọbọ, na-ekworo ọbụbụenyi ha, na-akọcha Sophie wee tụgharịa ya ka ọ bụrụ nwanyị dị afọ 90. N'ịchọ imebi anwansi, Sophie na -arịgo n'elu nnukwu ụlọ na -agagharị na Howl wee banye ndụ ọhụrụ nke ịtụnanya na ihe ịtụnanya. Mana dịka ekpughere ezi ike nke mgbaasị Howl, Sophie hụrụ onwe ya ka ọ na -alụ ọgụ iji chebe ha abụọ pụọ n'ọgbụgba afa nke na -eyi ụwa ha egwu. Na -egosi talent olu Lauren Bacall, Christian Bale, Billy kristal, Blythe Danner, Emily Mortimer, na Jean Simmons. Zụrụ TICKET ebe a.
RiffTrax Live Amityville 4: Mgbapụ Ọjọọ: Tuzdee, Ọktoba 26
A ka nwere ihe ọjọọ n'ebe ahụ n'ụlọ Amityville ochie. Otu ndị ụkọchukwu na-agbakọta iji mebie mmụọ ọjọọ nke nọtere aka na ọmarịcha akwa a, ime ụlọ ịwụ Dutch anọ jupụtara n'ọmarịcha ụwa ochie na ọtụtụ ihe mgbochi. MA - ihe ọjọọ agbanahụ! Nke ekwesịrị ime ka o doo anya site n'aha ihe nkiri ahụ. Oleekwa otú o si agbanahụ ya? Dị ka ihe ọjọọ niile na -eme: site n'inweta oriọna dị larịị, na -ere ya n'ụlọ ahịa ebe a na -ebuga ya na Los Angeles, ebe ọtụtụ ihe ịchọ mma ụlọ na -emesị chọta ụlọ.
N'oge na -adịghị anya, oriọna nke ndị mmụọ ọjọọ na -amalite ọchịchị nke ụjọ na ụlọ nke ezinụlọ aka ya dị ọcha, na -egbu anụ ụlọ na ndị na -arụzi ụlọ, na -amanye ụmụaka ka ha jiri ngwaọrụ ike n'ụzọ adịghị mma, wee nweta mkpụrụ obi nke nwanne nwanyị nke ọdụdụ Jessica, onye malitere ozugbo ime ihe dịka mkpokọta jerk.
Ọ dịịrị onye ụkọchukwu na-eto eto Fada Kibbler ịzọpụta ezinụlọ na ihu oriọna ọjọọ, ihu na bọlbụ, tupu ọtụtụ mmadụ anwụọ. Ọ dị mma, ọtụtụ mmadụ na -anwụ, mana nna Kibbler nwere ike kwụsị ya n'ikpeazụ? Jikọọ Bill (Corbett), Mike (Nelson), na Kevin (Murphy) na ụlọ ihe nkiri na mba niile maka ọgwụgwọ Halloween zuru oke - abalị nwere Rifftrax Live na Amityville 4: Mgbapụ Ọjọọ! Zụrụ TICKET ebe a.
The Call (Ahụmịhe Uncut): Wenezde, Ọktoba 27
Site na onye kere Njedebe Ikpeazụ, Lin Shaye na Tobin Udo kpakpando n'akụkọ a na-emenye ụjọ nke ọnwụ site n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1987. Mgbe ihe ọghọm dị egwu gasịrị, otu ndị enyi obere obodo ga-anọrịrị n'abalị n'ụlọ di na nwunye ọjọọ. Otu n'otu, nrọ ọjọọ ha kacha njọ na -adị ngwa ngwa ka ha na -abanye na mpaghara The Call. Enyi anọ. Otu oku ekwentị. 60 Sekọnd. Nọrọ Ndụ.
Ahụmịhe Uncut a na -egosipụta ihe nkiri na -ehichapụ yana ajụjụ ọnụ onye ntụzi na -eso ihe nkiri a. Zụrụ TICKET ebe a.
Nwoke A Na -adịghị ahụ Anya, Nwoke Wolf Njirimara ugboro abụọ: Satọde, Ọktoba 30
N'ịga n'ihu n'ememe ha nke nnukwu anụ mmiri nke Universal, Ihe omume Fathom Egwu Fest na-agụnye ihe nkiri abụọ na-agbaji ọkpụkpụ azụ n'otu ụbọchị. Gịnị na -eme nnukwu anụ na ihe na -eme mmadụ? Azịza ya nwere ike ịdị Nwoke A Na-ahụ Anya na Nwoke Wolf. Ha abụọ na -egosipụta ọmarịcha arụmọrụ na ọmarịcha mmetụta pụrụ iche na -enweghị atụ n'oge ha. Zụrụ TICKET ebe a.
ParaNorman: Tuzdee, Nọvemba 16
N'egwuregwu a na -atọ ọchị sitere na LAIKA, zombies nọchibidoro obere obodo. Kedu onye obodo ga -akpọ? Ọ bụ naanị nwata nwoke obodo Norman, onye nwere ike ịgwa ndị nwụrụ anwụ okwu. Na mgbakwunye na zombies, ọ ga-eburu mmụọ, ndị amoosu na, nke kachasị njọ, ndị toro eto, iji zọpụta obodo ya n'ọbụbụ ọnụ narị afọ. Mana nwa okorobịa a na-ekwu okwu mkparị na-eji obi ike akpọkọta ihe niile na-eme dike-obi ike na ọmịiko-ka ọ na-ahụ ka ihe omume ọjọọ ya na-agbada na njedebe ụwa ha. Nkedo olu: Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi, Anna Kendrick, Casey Affleck, Christopher Mintz-Plasse, Leslie Mann, Jeff Garlin, Elaine Stritch, Bernard Hill, Jodelle Ferland kwuru, Tempestt Bledsoe, Ọnye na -bụ Alex Borstein?, na John Goodman. Onye mepụtara ya Ọnye na -bụ Arianne Sutner? na Travis Knight. Onye dere ya Chris Butler. Duru ya Sam Fell na Chris Butler. Zụrụ TICKET ebe a.